Khilaaf xoogan oo ka dhex jira wadamada IGAD oo sidii loo qeybsan lahaa xilalka… – Hagaag.com
Khilaaf xoogan oo ka dhex jira wadamada IGAD oo sidii loo qeybsan lahaa xilalka…
Posted on 29 Oktoobar 2019 by Admin in World // 0 Comments
Khilaaf xoogan ayaa xiligaan laga dareemayaa in uu u dhaxeeyo wadamada Kenya iyo Itoobiya oo xubin ka ah dalalka xubnaha ka ah urur goboleedka IGAD.
Arintaan ayaa la xiriirta shaqsiyaadka noqonaya gudoomiyaha guddiga iyo madaxa fulinta ee urur goboleedka.
IGAD oo la yagleelay sanadkii 1996-dii ayaa ajandaha ay ka shaqeyso waxaa ka mid ah xalinta xiisadaha siyaasada iyo mida amni ee Geeska Afrika.
Muranka wadamada IGAD u dhaxeeya ayaa yimid 10 maalin ka hor markii gudoomiyaha haya xilka IGAD ahna ra’isul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed uu xilka xoghayaha fulinta u magacaabay wasiirkii hore ee arimaha dibada Itoobiya Workneh Gebeyehu.
Sida ku xusan warqada magacaabida ayaa muujineysa in Workneh xafiiska uu la wareegi doono 1da bisha soo aadan ee November.
Marka laga soo tago in talaabadan ay ka carootay Kenya ayaa hadane wadamada kale waxay saluug ka muujiyeen magacaabida mas’uulkaan oo ay sheegeen in aan loo marin shuruucda IGAD. Dalalka Somalia, Jabuuti iyo South Sudan ayaa hunguri ka haya qabashada xilalkan.
Balse Ra’isul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa sheegay in uu la tashi la sameeyay wadamada xubnaha ka ah Igad 10-kii bishan October oo hogaamiyeyaasha dalalkan ay isugu tageen xaflada furitaanka beerta midnimada oo ka dhacday magaalada Addis Ababa.
Wadamada xubnaha ka ah ururkan ayaa ah sideed dal waxaana ay kala yihiin Somalia, Jabuuti, Sudan, Eritrea, Itoobiya, Uganda, Kenya iyo Koonfurta Suudaan.